बजार:: Artha Dabali
दशैंमा केएनपिले रङ्गमा दङ्ग पार्ने ! ग्राहकलाई १० तोला सुन काठमाडौं/ जापानको सर्वोत्कृष्ट हेल्थी होम पेन्ट केएनपिले दशैंको अवसर पारेर पुनः एक पटक “रङ्गमा दङ्ग” योजना नेपाली बजारमा ल्याएको छ । योजना अन्तर्गत ग्राहकहरुले केएनपि इम्प्रेसन र एक्सल टोटलको प्रत्येक रु.६०,००० (भ्याट सहित) को खरिदमा एउटा कुपन प्राप्त गर्न सक्नेछन् । यस योजनामा ग्राहकहरुले लक्की ड्र मार्फत बम्परमा १० तोला सुन, १० भाग्यसाली ग्राहकले स्मार्ट फोन
सुनचाँदी किनबेच गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? हेर्नुस् आजको मूल्य कति छ काठमाडौं / नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाअनुसार सोमबार सुनचाँदीको मूल्य स्थिर देखिएको छ । मंगलबार ५ सयले घटेर ७१ हजारमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुन सोमबार पनि सोहि मूल्यमा कारोबार भइरहेको छ । त्यस्तै तेजावी सुनको भाउ समेत स्थिर देखिएको छ । तेजावी सुन आज प्रतितोला ७० हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । यता चाँदीको
सुनको मूल्य प्रतितोला ५ सयले घट्यो, कति छ आज ? काठमाडौं / लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्यमा आज सामान्य गिरावट देखिएको छ । शनिबार प्रतितोला रु ७१ हजार ५०० मा कारोवार भएको छापावाला सुनको मूल्य आज प्रतितोला रु ५०० ले घटेर रु ७१ हजार कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । तेजाबी सुनको मूल्य पनि सामान्य घटेको छ । तेजाबी सुनको मूल्य
सुनचाँदीको कारोबार गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ ? कति छ आजको बजारभाउ ? हेर्नुस् काठमाडौं / विहिबार एकचोटी १ हजार २ सय रुपैयाँ बढेको सुन साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने स्थिर देखिएको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन ७१ हजार ५ सय रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको छ । यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्यमा समेत परिवर्तन आएको छैन । आज तेजावी सुन तोलाको ७१ हजार २ सय
सुनचाँदीको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च, कति पुग्यो ? हेर्नुस् काठमाडौं / विहिबार सुनचाँदीको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । बुधबार तोलाको ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छापावाल सुन बिहिबार एकैचोटी १ हजार २ सय बढेको हो । महासंघकाअनुसार मंगलबार तोलामा ७१ हजार पुगेको सुनको भाउ हिजो बुधबार ७ सय घटेर प्रतितोला ७० हजार ३ सय रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको थियो । यस्तै आज तेजावी सुन
फेरि बढ्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति छ ? हेर्नुस् काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको विदेशी मुद्रा विनिमयदरअनुसार अमेरिकी डलरको भाउ बढेको छ । साउन २९ गते बुधबारको विदेशी मुद्रा विक्री विनिमयदर अनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ ९५ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११४ रुपैयाँ ५५ पैसा रहेको छ । त्यसैगरि बुधबार युरोपियन युरो एकको खरिददर १२७ रुपैयाँ ८२ पैसा र
सुनचाँदीको भाउ स्थिर, यस्तो छ आजको बजार मूल्य काठमाडौं / साताको दोस्रो दिन सोमबार पनि सुनचाँदीको भाउ स्थिर देखिएको छ । गत साताको शुक्रबार प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुन सोमबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । केहिदिनयता निरन्तर बढीरहेको सुनको भाउ गत साताको बुधबार एकैचाटी १५ बढेको थियो भने बिहिबार तोलाको ५ सय रुपैयाँ बढेर ७० हजार पुगेको हो
सुनचाँदी किनबेच गर्ने सोँचमा हुनुहुन्छ ? आजको बजारभाउ थाहा पाउनुस् काठमाडौं / साताको पहिलो दिन आइतबार पनि सुनचाँदीको भाउ स्थिर देखिएको छ । शुक्रबार प्रतितोला ७० हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको सुन आइतबार पनि सोही मूल्यमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ । केहिदिनयता निरन्तर बढीरहेको सुनको भाउ गत साताको बुधबार एकैचाटी १५ बढेको थियो भने बिहिबार तोलाको ५ सय रुपैयाँ बढेर ७० हजार पुगेको हो । यस्तै आज
आज आइतबारको विदेशी मुद्रा विनिमयदर कति छ ? हेर्नुस् काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २६ गते आइतबारको विदेशी मुद्रा विक्री बिनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । सो विनिमयदरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ ९९ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेको छ । त्यसैगरि मंगलबार युरोपियन युरो एकको खरिददर १२६ रुपैयाँ ५६ पैसा र बिक्रीदर १२७ रुपैयाँ २३ पैसा रहेको
सुनको कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ ? आज कति छ मूल्य ? हेर्नुस् काठमाडौं / साताको अन्तिम दिन शुक्रबार भने सुनचाँदीको भाउ स्थिर देखिएको छ । केहिदिन यता क्रमशः उकालो लागेको सुनचाँदीको मूल्य आज भने स्थिर देखिएको हो । शुक्रबार छापावाल सुन ७० हजार रुपैयाँमा नै कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । केहिदिनयता निरन्तर बढीरहेको सुनको भाउ बुधबार एकैचाटी १५ बढेको थियो भने बिहिबार तोलाको ५
आज अमेरिकी डलरदेखि कुवेती दिनारसम्मको मूल्य कति छ ? काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २४ गते शुक्रबारको विदेशी मुद्रा विक्री बिनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । सो विनिमयदरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११२ रुपैयाँ ८१ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ४१ पैसा रहेको छ । त्यसैगरि मंगलबार युरोपियन युरो एकको खरिददर १२६ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १२७ रुपैयाँ ०४ पैसा रहेको
केही दिनमै पूर्णरुपमा सेवा सञ्चालन : सुविसु काठमाडौं / इन्टरनेट, नेटवर्क तथा केबल टेलिभिजन सेवा प्रदायक कम्पनी, सुविसु केबल नेट प्रालिले एक, दुई दिनभित्रैमा सम्पूर्ण सेवा सञ्चालन हुनेगरी काम भइरहेको जनाएको छ । काठमाडौँस्थित बालुवाटारमा रहेको डाटा सेन्टरमा बुधबार भिषण आगलागी भएर अवरुद्ध भएको सेवा सञ्चालन गर्न प्राविधिक खटिएको सुविसु कार्यालयले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । बुधबार आगलागी भएको केही घन्टाभित्रै थापाथलीस्थित
रारामार्ट अनलाईनबाट सपिङ्ग गर्दा परिवारको लागी ‘निशुल्क स्वास्थ्य बीमा’ काठमाडौं / नेपाली युवाहरुको अगुवाईमा जापानबाट सुरु भएको रारामार्ट ब्राण्डले नेपालबाट समेत सेवा प्रारम्भ गरेको छ । करिब ६ महिना अघिदेखी नेपालमा रारामार्ट डटकम नामबाट संचालनमा आएको रारामार्टले आज राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी सपिङ्ग गर्दा परिवारको निशुल्क स्वस्थ्य उपचार दिने घोषणा गरेको छ । रारामार्ट नेपालका अध्यक्ष तथा प्रख्यात उद्योगपति प्रदिपजंग पाण्डेले प्रिमियर ईन्स्योरेन्स कम्पनीसँगको
सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च, किन बढिरहेछ सुनको भाउ ? काठमाडौं / लगातार उकालो लाग्दै गएको सुनको मूल्य अहिलेसम्मकै उच्च भएको छ । बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रतितोला रु ७० हजार पुगेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, तेजावी सुन प्रतितोला रु ६९ हजार ७०० पुगेको छ भने चाँदीको मूल्य पनि निरन्तर उकालो लागेको छ । आज चाँदी प्रतितोला ८२५ मा कारोबार भएको महासङ्घले
बिहिबारको विदेशी मुद्रा विनिमयदर कति छ ? हेर्नुस् काठमाडौं / नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन २३ गते बिहिबारको विदेशी मुद्रा विक्री बिनिमयदर सार्वजनिक गरेको छ । सो विनिमयदरअनुसार आज अमेरिकी डलर एकको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा रहेको छ भने बिक्रीदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा रहेको छ । त्यसैगरि मंगलबार युरोपियन युरो एकको खरिददर १२६ रुपैयाँ ६५ पैसा र बिक्रीदर १२७ रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको